Baarlamanka oo markale ku fashilmay mooshinka ka dhanka ah baarlamanka Juba – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Baarlamanka oo markale ku fashilmay mooshinka ka dhanka ah baarlamanka Juba * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka oo markale ku fashilmay mooshinka ka dhanka ah baarlamanka Juba
By A warsame on 1st June 2015
Mareeg.com: Baarlamanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii 2-aad ku guuldareystay inuu cod u qaado mooshin ka dhan ah baarlamaanka maamulka KMG ee Juba, kaasoo doodi ka jirto qaabka loo dhisay.
Kulankii maanta oo Isniin ah lagu waday in Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ay codka ugu qaadi lahayeen mooshinka ka dhanka ah Baarlamaanka Jubba ayaa u fashilmay kooram la’aan awgeed u baaqday, iyadoo xildhibaan badan shirka imaan waayeen.
Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar oo shir guddoominyay kulanka ayaa howl wadeenada ka dalbaday in la tiriyo tirada fadhida hoolka shirarka, hase ahaatee tiradii ayaa dhamaan weyday, isla markaana kooramka uu buuxsami waayay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in arrinta dib u dhaca ay tahay arrin siyaasadeed, isla markaana Xildhibaanada diidan mooshinka ay ugu gol leeyihiin in mooshinka uu bur buro, inta aan codka loo qaadin.
Xildhibaanada mooshinka keenay qaarkood ayaa ku eedeeyay Guddoonka Baarlamaanka sababaha dib u dhaca codeynta mooshinka ay ka mas’uul yihiin, isla markaana aanay muuqan wali tallaabo ay ka qaadeen Xildhibaanada fadhiyada ka maqan.
Mooshinkan oo aysan jecleysan xukuumadda Soomaaliya, waxaa baarlamaanka horgeeyey qaar ka mid ah xildhibaanada, iyagoo ku doodaya in Axmed Madoobe iyo dad ku feker ah ay si aan cadaalad aheyn ku qeybiyeen xildhibaanada baarlamaanka Juba.
Maamulka Jubaland ayaa ku eedeeyey madaxweynaha kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiikh Adam in uu yahay mashiinka ka danbeeya Mooshinkan maadaama uu muddo badan ku soo caano maaley Mooshino Baarlamaanka lagu jaah wareeriyo.